बागी–३ ले तीन दिनमा कति कमायो? - Everest Dainik - News from Nepal
बागी–३ ले तीन दिनमा कति कमायो?
काठमाडौंः शुक्रबार रिलिज भएको टाइगर सराफ अभिनित बलिउड फिल्म बागी–३ ले रिलिजको तीन दिनमा ५० करोड कलेक्सन गरेको छ ।
फिल्मले रिलिजको तेस्रो दिन २० करोड ३० लाख कमाई गरेपछि तीन दिनमा कुल ५३ करोड ८३ लाख कमाई गरेको हो । फिल्मले पहिलो दिन १७ करोड ५० लाख कमाई गरेको थियो भने दोस्रो दिन १६ करोड ३ लाख कमाई गरेको थियो ।
बागी–३ को कथा कमजोर रहेको रिभ्युले असर गरेको बताइएपनि फिल्मलाई अहिले विश्वभर चलेको कोरोनाले समेत असर गरेको देखिएको छ । टाइगर सराफको क्यारियरमा भने बागी–३ विकइन्डमा तेस्रो धेरै कमाई गर्ने फिल्म बनेको छ ।
२०१९ मा रिलिज भएको वारले ५ दिनको विकइन्डमा १६६ करोड २५ लाख कमाई गरेको थियो । त्यस्तै २०१८ मा रिलिज भएको बागी–२ ले तीन दिनमा ७३ करोड १० लाख कमाई गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस ‘बागी ३’: कस्तो छ फिल्म ?
त्यस्तै बागी–३ ले तीन दिनमा ५३ करोड ८३ लाख कमाई गरेको छ । त्यस्तै २०१९ मा रिलिज भएको स्टुडेन्ट अफ द इयर–२ ले तीन दिनमा ३८ करोड ८३ लाख कमाई गरेको थियो । त्यस्तै २०१६ मा रिलिज भएको फिल्म बागीले ३८ करोड ५८ लाख कमाई गरेको थियो ।